प्रवास Archives – Samacharpati
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ हजार ७९० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि
फेवातालको संरक्षणका लागि संरक्षित फेवा जलाधार क्षेत्र घोषणा गरिदै
हेर्नुहोस आज सुनको मुल्य कति ?
सांसदहरुलाई दशैँ भत्ता फिर्ता गर्न काँग्रेसका सभापति देउवाको निर्देशन
केएमसीको तेस्रो तलाबाट हामफालेका युवकको मृत्यु
कास्कीका रेशम योगी युवा सजगता अभियानको केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)काे कोभिड १९ तथ्यांक
चिरन शर्मा, लन्डन, १८ असाेज । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणबाट विदेशमा विभिन्न मितिमा संक्रमित नेपाली मध्य ९२ प्रतिशत कोरोनामुक्त भएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार नेपाल बाहेक ४२ देशमा ३५ हजार ९ सय १६ जना कोरोनामुक्त भएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार विदेशमा शनिवार साँझसम्म ३९ हजार […]
काठमान्डाैँ, १० असाेज । गैरआवासीय नेपाली संघ एसिया प्यासिफिकको आठौं क्षेत्रीय भेला तथा पहिलो विज्ञ सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन भएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले अनलाइन माध्यमबाट संघको भेलाको संवोधन गर्दै औपचारिक उद्घाटन गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको विकासमा गैरआवसीय नेपालीको योगदान अतुलनीय रहेको बताउँदै विदेशमा नेपालीले सिकेको ज्ञान, सिप […]
गोठादीका पहिरोपीडितलाई मगर संघ बेलायतको ४० हजार सहयोग
पोखरा, १० असोज । नेपाल मगर संघ, केन्द्रीय समितिको आह्वान र अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासंघको समन्वयमा मगर संघ बेलायतद्वारा संकलित राहत रकम शुक्रबार कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८, सराङकोट, गोठादीका पहिरोपीडितलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । मगर संघ, बेलायतले पठाएको राहत रकम ४० हजार रुपैयाँ नेपाल मगर संघ, कास्कीले सराङकोटका पहिरो पीडितलाई प्रत्यक्ष रुपमा भेटेर हस्तान्तरण […]
विदेशमा रहेका २४४ नेपालीको काेरोनाबाट निधन
काठमाडौँ, ४ असोज । काेरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट विदेशमा रहेका २४४ नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार १७ मुलुकमा ती नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन् । कोरोनाका कारण नेपालसहित विश्वभर जम्मा ६४५ नेपालीको निधन भएको संघले जनाएको छ । गत साता बेलायत, स्पेन र भारतलगायत देशमा कोरोना सङ्क्रमणदर सामान्य रुपमा […]
अमेरिका, ४ असाेज । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनको शनिबार साँझ औपचारिक उद्घाटन भएको छ । शुक्रबारदेखि नै अनौपचारिक रुपमा सुरु भएको सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का अध्यक्ष कुमार पन्त तथा राष्ट्रसंघका लागि नेपाली नियोगका स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईले संयुक्त रुपमा गर्नु भएको […]
विदेशबाट नेपाल फर्किएकालाई गैरआवासीय नेपाली संघको अनुरोध
काठमान्डाैँ, २८ भदाै । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक संजीव सापकोटाले विदेशबाट नेपाल फर्किएकालाई १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्न अनुरोध गर्नुभएको छ । विदेशमा पीसीआर परिक्षण गराएर नै स्वदेश जाने भएतापनि स्वास्थ्य सावधानीका लागि नेपाल सरकारले तोकेअनुसार क्वारेन्टिनमा बस्न र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन डा. सापकोटाले आग्रह गर्नुभएको हो । संक्रमण जुनसुकै बेला […]
साउदीमा ६० नेपालीको शव अलपत्र
काठमान्डाैँ, २८ भदाै । कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि भएको विश्वव्यापी लकडाउनका कारण विदेशमा अलपत्र परेका, आफन्तकोमा गएर उतै रोकिएका र अन्य विविध कारण स्वदेश फर्कन नपाएका नेपालीको उद्धार कार्य जारी छ । हालसम्म गैरआवासीय नेपाली संघ, नेपाल सरकारका विदेशस्थित दूतावास तथा नियोगहरुको संयुक्त पहलमा ३० देशमा रहेका ६१ हजार ७ सय १० जना नेपालीको उद्धार गरिएको […]
कोरोना संक्रमणबाट विदेशमा थप ४३ जना नेपालीको मृत्यु
लन्डन, २८ भदाै । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणबाट विदेशमा विभिन्न मितिमा थप ४३ जना नेपालीको निधन भएको यो साता पुष्टि भएको छ । गत मार्च महिना यता साउदी अरबमा मात्रै ४१ जनाको मृत्यु भएको त्यहाँस्थित राजदूतावासलाई उद्धृत गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिले उल्लेख गरेको छ । यो सँगै साउदी अरबमा […]
ग्याँस सिलिण्डर पड्किँदा यूएईमा एक जना नेपाली युवककाे मृत्यु
काठमाडौं, २८ भदाै । ग्याँस सिलिण्डर पड्किँदा यूएईमा एक जना नेपालीसहित पाँच जनाको ज्यान गएको छ । ज्यान जाने नेपालीमा घैरुङ ५ गोर्खाका सरन कुँवर रहेका छन् । आबुधावीको एयरपोर्ट रोडमा रहेको केएफसी रेष्टुरेन्टमा ग्याँस लिक भएर भदौ १५ गते पड्किँएका बताइएको छ । दुर्घटनामा एक जना नेपाली भाषी भारतीय, दुई जना फिलिपिनो र एक […]
हाल सम्म अलपत्र परेका निधन भएका ५६ हजार ७ सय ७७ जना नेपालीकाे उद्धार
लन्डन, २१ भदाै । कोरोना भाइरसको संक्रमण पछि भएको विश्वव्यापी लकडाउन पछि विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार कार्यजारी रहेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुको संयुक्त पहलमा ५८ देशबाट ३ सय ५९ वटा फलाइट मार्फत हाल सम्म ५६ हजार ७ सय ७७ जना नेपालीलाई ३० देशबाट उद्धार गरिएको छ । यस्तै विदेशमा […]
स्वर्गीय भिसी तुलबहादुर पुनका नाममा बेलायतमा रेल सेवा
लण्डन, १८ भदाै । बेलायतको एक रेल सेवा ग्रेट वस्टन रेलवेले भिक्टोरिया क्रसप्राप्त स्वर्गीय तुलबहादुर पुनको नाममा रेलसेवा नामकरण गर्ने भएको छ । दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको ७५ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा उनको सम्मानस्वरूप नाम उल्लेख गर्ने उक्त रेलसेवाले जानकारी दिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो बहादुरी देखाएका पुन भिसी पाउँदा केवल २१ वर्षको रहेका थिए । उक्त […]
नेपाली कामदारका लागी कतारले बढायो पारिश्रमिक
काठमाडौं, १५ भदाै। कतारले श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर कतारले १ हजार रियाल पुर्याइएको छ। श्रमिकले खाना र आवाससहित न्यूनतम १ हजार ८ सय रियाल पाउने भएका छन् । खानाका लागि प्रतिमहिना थप ३ सय र आवासका लागि ५ सय रियाल दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रावधान राजपत्रमा प्रकाशित भएको ६ महिनापछि […]